On avr 16, 2019 17 704
Teny amin’ny Hotel Carlton Anosy, ny zoma lasa teo, no nampahafantarana , fa masoivoho hitarika ny ady hanoherana ny herisetra, tarihin’ny sampandraharaha ny firenena mikambana misahana ny mponina (UNFPA ), Ramatoa Mialy Rajoelina. Izy dia sady vadin’ny Filoham-pirenena no filoha mpanorina ny fikambanana Fitia.
Nandritra ny fanamarihana ny faha 50 taona ny UNFPA no nanaopvana ny fanendrena. Tsy tongatonga ho azy izany fa efa nisy fanehoan’ny vadin’ny filoha ny Repoblika ny fahavononany ny hiady araka izay azo atao eo amin’ity herisetra ity.
Raha vao miresaka herisetra, mby an-tsaina ny fahoriana mahazo ny vehivavy. Maro amin’izy ireny no mizaka sy miaritra tsy fidiny ny vono. Manginy fotsiny ny vehivavy niasa tany ivelany, niaritra ny mafy, izay nihatra aman’aina nohonny asa nataony. Any an-tokantrano, tsy vitsy no mizaka ny fikasian-tanana arahan’ny fandaozan’ny lehilahy sasany ny vady aman-janaka .
Ny antotanisa voaray, dia mitatitra fa anisany mahatonga ny fahamaroan’ny fisaraham-banambadiana ny fisian’izay herisetra izay eo amin’ny vehivavy 16 ka hatraminny 26 taona. Manaitra ny fahitana fa 27% amin’ny vehivavy nanambady no latsaky ny 15 taona .
Eto Madagasikara dia ampahatelon’ny ankizivavikely 13 taona dia efa iharan’ny herisetra ara-nofo , raha toa ka 50% vehivavy tratry ny herisetra ara-batana . Matetika ny herisetra an-tokatrano no mitranga eto Madagasikara.
Raha hiverenana ny fanendrena ny vadinny filoha, Ramatoa Mialy Rajoelina , dia nanamafy ny fahavononany ny tenany nandritra ny lahan-teniny izay nataony teny amin’ny Carlton. » Araka ny efa nambarako tamin’ny andro eran-tany ho an’ny vehivavy, vonona aho ny hiady amin’ny herisetra. Mila mandray andraikitra isika mba ampitsaharana izany “, hoy izy.
Hisy araka izany ny lalàna hentitra hiadiana amin’ny herisetra mianjady amin’ny vehivavy ary anisan’ny hitarika ny ady rahateo ny Filoha Andry Rajoelina, izay naneho ny fahavonany ihany koa nandritra ny lahateny nataony, nentina nanamarika ny faha 50 taopnan’ny Sampandraharahan’ny Firenena Mikambana miahy ny Mponina na ny UNFPA izany.
BNGRC: NANDRAY NY TOERANY NY TALE JENERALY VAOVAO ELACK OLIVIER